Iwe Haubhadharira Yemagariro Media Vabvunzi | Martech Zone
Iwe Haubhadharira Yemagariro Media Vabvunzi
Chitatu, September 21, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Iine tarisiro yakakura ye Martech Zone, Ini ndinogona kusawana iyo yemagariro inosimudzira iyo yakanaka blog senge Gutsa uye Shandura unowana (Kwakanaka kutumira kubva kuna Jay!)… Asi ndinotenda nharaunda yatakavakira pano Martech Zone.
Chazvino Zoomerang Poll isu takawedzera pamasocial media mazano anondizadza nekudada… imi vanhu muri vepamusika vashambadzi! Iwe uri kushingairira kutora chikamu mune vezvenhau, uchibatanidza zvirimo ipapo, uchibhadhara maturusi uye kusimudzira… uye kuyera kudzoka pane kudyara. Zvichitaurwa zviri nyore… zvinotyisa! Zvinoreva kuti isu takakwikwidzana nekukuunzira zvemhando yepamusoro zvekushambadzira zvakanyanya sekutanga.
Mumwe anogona kushamisika… kana DK New Media ishamwari midhiya yekubvunza yakasimba, nei iwe uchigona kufara kuti hapana mumwe wevaverengi vako anobhadharira vanobvunzurudzwa pasocial media? Zvakanaka… Ndiri kuzozvitaura… haufanire kudaro. Vezvemagariro venhau varairidzi idhimoni gumi nemaviri uye hunhu hwunoita kunge chero munhu anogona kukamura mutongo wemakumi mana nemakumi mana ane hashtag uye @ chiratidzo.
Makambani ari kuisa mari mukushambadzira kwekubvunza anobatsira kuti vaone vanachipangamazano vane ruzivo rwekushanda kuburikidza neakasiyana-siyana, epamhepo-midhiya ekushambadzira marongero ayo anowedzera imwe nhepfenyuro uye anowedzera kudyara kwavo nemhedzisiro. Izvo zvinotora chipangamazano ane ruzivo rwakawanda. Ndine urombo kana ndikangotuka chikamu chevateereri vangu ... asi kunze kwekunge iwe uchiziva kukanganisa kwenzanga pakutsvaga, nhare, zvetsika midhiya, email, nezvimwe ... uye maitiro ekuyera kushanda kwayo ne… uchiri kuchikoro chepuraimari.
Sei Orabrush akapinda muWalmart
Sep 21, 2011 na2: 21 PM
Hi Doug, ndauya pano ndichitevera chinongedzo kubva kuna Jay's blog post. Chinhu chekutanga chandinoona ndechekuti anokupa yakatwasuka-kumusoro kiyi-yakapfuma yekubatanidza uye yako yekudzosera link ndeye kune yake posvo nefuremu yako yakatenderedza.
Chinhu chechipiri chandinoona ndechekuti hapana imwe yesarudzo muvhoti ari marongero chaiwo. Izvo zviito, maitiro, uye seti yezviito. Kushandisa yemahara yechitatu-bato enhau midhiya maturusi haisi zano. Iyo nzira yekushandisa zano.
Saizvozvowo, kubhadhara mubatsiri wezvemagariro harisi zano. Iwe unobhadhara wezvemagariro venhau mubatsiri kuti akubatsire iwe kuvandudza, kuendesa, uye kugadzirisa zano
Chinhu chekupedzisira chandinoona ndechekuti iwe unoona-pane izvo kunze kwekunge uine metric iyo mepu inodzokera kuzvinangwa zvako zvine hungwaru, iwe uchiri n00b, uye iwe unoda hutungamiriri hwenyanzvi hwemunhu anokwanisa kushambadzira Internet. Props yekutaura kudaro.
Sep 21, 2011 na2: 35 PM
Ndinoonga kubatana kwaJay! Sezvo isu tichitaura pamusoro pezvishandiso zvakawandisa pano, tinozvinyudza mune zvinongedzo zvinobuda saka ini ndiri kuyedza iyo furemu nzira kuti ndione kana ichivandudza edu akazara SEO mhedzisiro zvachose. Ini ndichave ndichigovana iyo ruzivo mune ramangwana posvo.
RE: Maitiro, ini handidi kuti handibvumirane newe asi zvinonetsa kutsanangura zvizere sarudzo mukati mezita rezita rega. Ini ndagutsikana nekuziva kuti vanhu vanonzwisisa chinangwa chiri kumashure kwesarudzo uye havana kubatwa muminutia. Ini ndaifanirwa kuyedza kuburitsa 'nhanho' muvhoti kuti ndione danho rekushomeka nekudyidzana makambani aiita nezano ravo.
Izvo hazviitwe nyore ... asi kutambisa svondo muverbiage pane kungokanda sarudzo kuti uwane kunzwa kunze kwaive iko kutengeserana. Ini ndaida kutora poll kunze uko. Dai ichi chaive chepamutemo, chiverengero chakakodzera kuongororwa, ndingadai ndakatora zano rakatosiyana.
Ini ndinoti ini handidi 'kupokana' nekuti ini ndine makambani akavaka zano ravo kuburikidza nekungobatanidza zvemukati ... kana kungobhadhara wechitatu bato. Icho chishandiso 'chinogona' kuve zano.
Sep 21, 2011 na2: 51 PM
Kutenda nemhinduro inofungisisa! Ndichadzoka kuzoverenga zvimwe zvinyorwa, uye ndinofara Jay akabatana newe.
Ini ndinobvuma zviri nyore kuti ndine chip pabendekete rangu kana zvasvika pakutaura nezve "social media strategy." Ini ndinotenda kuti kana zviri kuitwa nekambani isiri yakakura, chirongwa chakagadzirwa nemaune, harisi zano. Pane kudaro, ibasa rakabatikana chete. Dzimwe nguva zvinoshanda, asi kazhinji kacho zvinokusiya iwe chawatangira, varombo chete uye vaneta. Iri ibasa kumaindasitiri edu chero munhu paanobatsira vatungamiriri vemasangano kuti vazive zano iri chaizvo.
Sep 21, 2011 na2: 55 PM
Uye saka iwe unofanirwa, Dhanyeri! Kune vanhu vakawandisa vari kumhanya-mhanya uye vachikanganisa mhirizhonga nemakambani… kuvaita kuti vasvetuke vasati vawana zano zvizere munzvimbo. Ini ndinoshandisa kakanyanya kungwarira mune ramangwana neverbiage yangu. Thanks zvekare! 🙂
Sep 21, 2011 na3: 37 PM
Ameni, Doug. Ameni. Nekudaro, ini ndinofunga urikuenda pamusoro pazvo asi ndinonzwisisa kuti ndiyo yaive pfungwa yako. Kuyera kwakakosha uye kugona kuendesa chigadzirwa chako nenguva kwakatonyanya kukosha.
Sep 21, 2011 na3: 42 PM
Ndakaedza kugadzirisa chirevo changu asi handina kukwanisa nekuda kwechimwe chikonzero. Ini ndinotenda kuti zvinobatsira kuhaya mumwe munhu ane "mapoka emapuratifomu, blah-blah, yemakambani matauro, akananga midhiya ruzivo" asi zvinonyanya kukosha kuhaya munhu zvichienderana nezvakabuda. Kungoti nekuti mumwe munhu asina ruzivo hazvireve kuti havagone kuendesa chigadzirwa chine chinangwa uye chinotungamirwa nemhedzisiro.
Wese munhu anotanga kumwe kunhu.
Sep 21, 2011 na3: 51 PM
Kwete chokwadi ndinobvuma, Kyle. Kana mumwe munhu asina ruzivo, vanofanirwa kutora nguva yekuenda kunoshandira kumwe kunhu uye kuitora. Ini ndinoona makambani akawandisa akatungamira kupinda mutsvina nevanhu vasina ruzivo. Kana zviri zvemhedzisiro… zvinofanirwa kuenderana ndisati ndaenda kuzovimba nazvo nebhajeti rangu. Ini handingatarisira chero chinhu chidiki kubva kune vatengi vangu futi. Hatisisiri mukudzidzira zvekare… kunze kuno kune mabasa nemakambani anoenderana nesu.
Sep 21, 2011 na4: 30 PM
Ini ndinofungidzira ndiri kubva kunzvimbo yangu kupfuura chero chinhu chipi zvacho. Kana ini ndichivaka kudzidziswa kwemakambani, kushaya kwangu ruzivo rwemakambani haisi nyaya. Zvino, ndinobvuma kuti pakushambadzira, kusimudzira, uye kubvunza iwe unogona kuve nenyaya. Ndakabvaruka pane iyo. Ndave nekambani kwemakore mashanu iyo isina "ruzivo" tisati tatanga.
Ini handifunge kuti unofanirwa kuenda "kunoshanda kumwe kunhu" usati watora basa seye chipangamazano kana mumwe munhu anogona kuendesa kukosha. Kana ini ndakabhadharwa kufadza timu yepamusoro kana kubatsira kuumba zano rehombe risingabatsiri… kana ndiri kuendesa kukosha… hazvifanirwe kunge zvine basa.
Ndine rondedzero yakazara yevanhu vane ruzivo vakatadza. Handizive kana ruzivo iri nyaya… haufanire kuve kugona kwako kuendesa zvaunotengesa? Nguva?
Uye nditende, ndiri kuuya kubva kunzvimbo yekutengesa chimwe chinhu uye kutadza… ndinofunga isu tese tine.
Sep 21, 2011 na4: 40 PM
Handifunge kuti urikubatana neni pachikamu che'chiitiko '. Wanga usiri kuvaka dzidziso kumakambani ekuti unganyatso kuvaka sei kambani ... wanga uchivaka dzidziso yekushandisa zvinobudirira pasocial media, handiti? Uye iwe wakadzidziswa mukuvandudza kudzidziswa, handiti?
Saka… icho chinhu chaWAKAZIVA uine… uye kudzidziswa kwako kwakabudirira. Ini ndinokuhaya iwe ... asi ini handisi kuzokupinza basa kuti ubatsire bhizinesi rangu kuwana chirongwa chitsva chekuchengetedza hutano iwe usina ruzivo ipapo, handiti?
Kana zviri zvekutadza, handingamboshanda nevanhu kana vakati havana kumbokundikana. Ini ndinofunga zvandakataura ndezvekuti ivo "vaienderana" mukukwanisa kwavo kuwana zviwanikwa. Izvo zvinosiya nzvimbo yekutadza. Asi ini zvakare handisi kuzohaya chipangamazano chinoti, "kusvika parinhasi, ndakashanda nevatengi vasere ndikatadza kuwana mhedzisiro ye8 yavo". 🙂
Sep 21, 2011 na8: 10 PM
ESE Midhiya yakabatana (hapana pun inonzi Zuck). Kusheedza vanonzi vezvenhau vanobvunzurudza "dime gumi nemaviri" hakuiti ruramisiro. Ndinewe zana muzana ndokuwana musana wako mukoma.
Sep 26, 2011 na5: 49 PM
"Vanachipangamazano vezvemagariro evanhu vashoma uye zvikwanisiro zvinoita kunge chero munhu anogona kutora mutongo wemakumi mana nemakumi mana ane hashtag nechiratidzo che @."
Icho chinenge chinonyadzisa icho chisina kukwana mumavara zana nemakumi mana.
Ehezve, kana iwe uri mutendi mune zviuru gumi zvekutonga, zvingave zvakaoma kune chero munhu kuve nyanzvi mune zvemagariro media; hazvina kumbogara kwenguva yakareba zvakakwana.
Paaive kumusangano weExpact Target, Jay Baer akataura kuti "zvemagariro enhau ibasa izvozvi, asi munguva pfupi ichave hunyanzvi. Kungofanana nekutaipa kana kugadzira makopi. "Taimbove nevanhu veizvozvo, ipapo takazoona kuti zvinoshanda zvakanyanya kana munhu wese aine hunyanzvi." (Zvimwe zvakatsanangurwa.) Zvisinei, ndinofunga anogona kunge ari pachokwadi.
Sep 26, 2011 na5: 57 PM
Iye Jay Baer mukomana mumwe akarurama dude!